Ukuhleleka kwezombangazwe kwaZulu
Izigaba zezombangazwe zamaZulu
Inhlangano yezombangazwe yeZulu yakhiwa njengepiramidi. Ngaphansi kwesakhiwo kwakuyizindlu ezizimele (imizi), eyayihlanganisa izingxenye ezincane kakhulu zezombusazwe kuhulumeni wesizwe. Umuzi ngamunye wayelawulwa yi-umnumzane (ikhanda lomkhaya), owayengumthwalo wokugcina ukuhleleka nokubhekana nanoma yiziphi izingxabano zasekhaya noma zendawo ezingase zivele. Wayebhekene ne-induna - inhloko yesifunda (isigodi) lapho umuzi wawukhona khona.
Inhloko yesifunda ibhekene nayo yonke imithetho kanye nokuhleleka esifundeni sakhe futhi ixazulule izingxabano lapho inhloko yendlu ingakwazi ukuxazulula noma ukuthi yayinkulu kangakanani noma ibalulekile ukuthi ayisebenzise. Isifunda sakhe sakha ingxenye yesifunda esikhulu, i-isifunda, esasilawulwa yinhloko yesifunda esibalulekile noma induna yefa (inkosi), owayephethe ngokuqondile inkosi.
Ezweni nasesikhathini lapho ukuxhumana kwakunzima ukufeza, lokhu kuhlakazeka kwezombusazwe kwepiramidi kwanikeza indlela ephumelelayo yokuba inkosi isebenzise umbuso wezepolitiki phezu kombuso wayo. Iningi lalezi zakhiwo liye lasinda ukuphazanyiswa kweminyango emhlophe elandelanayo, futhi uhulumeni omusha wentando yeningi waseNingizimu Afrika, okhethiwe ngo-1994, uye wavuma isidingo sokusekela nokugcina izakhiwo zendabuko ezithakazelisayo ezithakazelisayo zasemakhaya.
Kodwa-ke, ezinye izindlela zendabuko ziphikisana nezinhlinzeko eziqukethe umthethosisekelo omusha waseNingizimu Afrika, oqinisekisa ukulingana kungakhathaliseki ukuthi ubuhlanga, ubuhlobo benkolo noma ubulili. Ukunikezwa komhlaba kwabesifazane, okungeke kwavunyelwa esikhathini esedlule, kuye kwaba yinto evame kakhulu.